access is denied လို့ပေါ် ပြီ ဖိုင် ဖွင့်လိ့ုမရလို့ — MYSTERY ZILLION
access is denied လို့ပေါ် ပြီ ဖိုင် ဖွင့်လိ့ုမရလို့
ကျွန်တော် လဲ ဘာမှ မလုပ် ပဲ ပုံမှာပြထားသလို ပေါ်နေတယ်
သူငယ်ချင်းတို့ကော် ဖြစ် ဖူးကြလား သိရင် ကူညီ ပြောပြ ပါဦး
ကျွန်တော် ဆီ မှာဖြစ်နေ လို့ ဖြတ်လို့လဲမရဘူး
ဖွင့်လို့လဲ မရ ဘူး
properties ကို ဖွင့်ရင် 0kb ပဲပြတယ်
ဗိုင်းရပ်စ် ကြောင့် လဲ မဟုတ်ဘူးထင် တယ် scan လဲ ဖတ်ပြီးပြီ
ကူညီ ပါဦး အရေးကြီးတဲ့ ဖိုင် မလို့ပါ....:2:
Dear Bro !!
Once, I haveaproblem like you met. It is an effect of Virus. I am sure cause - when I got that problem, I scanned PC and virus cleaned but Virus added value in registry and I finally run "Registry Mechanic" and it was OK.
I think you'd better scan you PC with another Anti Virus - Kaspersky and AVG is good for those problems.
It is only my experience and it might be differed with your conditions.
Folder Options >view tab
Advanced Settings အောက်က Use simple file sharing (Recommended) ဖြုတ်လိုက်။
ပြီးရင် access is denied လို့ပေါ်နေတဲ့ Folder (or) file ကို right-click > Properties >
the Security tab ကိုရွေး the Advanced button နှိပ်။
the Owner tab ကိုရွေး Name ထဲက your user account နှိပ်။
Replace owner on subcontainers and objects ကိုရွေး။ OK ကိုနှိပ်။restart ပေါ့။
ပြီးလျှင် access is denied လို့ပေါ်နေတဲ့ Folder (or) file ကို right-click > Properties >
the Security tab ကိုရွေး the Add button နှိပ်။
ဒီလောက်ဆို အဆင်ပြေပါတယ်။ကျနော် တချို့ နေရာတွေမှာ အတိုချုံု့ ရေးထားပါတယ်။
တကယ် အဖိုးတန် တယ် ဗျာ အာလုံး အဆင်ပြေ သွားပြီ
ဒီဖိုရမ် ကနေ ကျွန်တော် အခက်အခဲလေးတွေ ကို ကူညီတာ
နှစ်ခါ ရှိပါ ပြီ ကျေးဇူးအထူး တင်ပါတယ်..
ကျွန်တော် သိတာလေးတွေလဲ ေ၀မျှ ပါမယ်.....